Justin Bieber တောင် ချီးကျူးလိုက်တဲ့ Ariana Grande ရဲ့ 'Thank U, Next'
Justin Bieber တောင် ချီးကျူးလိုက်တဲ့ Ariana Grande ရဲ့ ‘Thank U, Next’
9 Nov 2018 . 6:14 PM
Ariana Grande ရဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ထွက်ရှိထားတဲ့ သီချင်းသစ် ‘Thank U, Next’ ဟာ အခုဆိုရင် လူတိုင်းရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ညည်းမိနေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဒီလူတွေထဲမှာ ယူတို့ရဲ့ အသည်းကျော်လေး Justin Bieber လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ြပီး Twitter မှာတောင် Tweet လုပ်ပြီး ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
— Justin Bieber (@justinbieber) November 8, 2018
“Thank you next isabop. My favorite song. Least this song is smash. Fire,” ဆိုပြီး Tweet လုပ်ထားခဲ့တာပါ။
ဒီသီချင်းဟာ Ariana Grande က ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ရေးတဲ့ ရည်းစားစာလို ဖြစ်ပြီး အတိတ်က သူနဲ့ ပက်သက်ခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်းတွေရဲ့ ကိစ္စတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြထားတဲ့ သီချင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ “ရည်းစားဟောင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ သူဘယ်လို ဖြတ်သန်းလာရတယ်ဆိုတာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ဖော်ပြထားတဲ့ သီချင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Catchy ဖြစ်တဲ့ သီချင်းစာသားတွေ ပါဝင်သလို “one taught me love, one taught me patience, one taught me pain” ဆိုတဲ့ စာသားဟာ Social Media မှာ လုံးဝကို Hit ဖြစ်နေတဲ့ စာသားလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် Ariana Grande ရဲ့ သီချင်းကို ခံစားကြည့်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရော Ex တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လို ခံစားချက်တွေ ရှိလဲဆိုတာ မျှဝေလို့ ရပါတယ်နော်။
Justin Bieber တောငျ ခြီးကြူးလိုကျတဲ့ Ariana Grande ရဲ့ ‘Thank U, Next’
Ariana Grande ရဲ့ နိုဝငျဘာလ ၃ ရကျနကေ့ ထှကျရှိထားတဲ့ သီခငျြးသဈ ‘Thank U, Next’ ဟာ အခုဆိုရငျ လူတိုငျးရဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ ညညျးမိနလေောကျပွီ ထငျပါတယျ။ ဒီလူတှထေဲမှာ ယူတို့ရဲ့ အသညျးကြျောလေး Justin Bieber လညျး အပါအဝငျဖွဈပီး Twitter မှာတောငျ Tweet လုပျပွီး ခြီးကြူးခဲ့ပါတယျ။
“Thank you next isabop. My favorite song. Least this song is smash. Fire,” ဆိုပွီး Tweet လုပျထားခဲ့တာပါ။
ဒီသီခငျြးဟာ Ariana Grande က ကိုယျ့ဘာသာ ပွနျရေးတဲ့ ရညျးစားစာလို ဖွဈပွီး အတိတျက သူနဲ့ ပကျသကျခဲ့တဲ့ ရညျးစားဟောငျးတှရေဲ့ ကိစ်စတှကေို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖျောပွထားတဲ့ သီခငျြးလညျး ဖွဈပါတယျ။ “ရညျးစားဟောငျးတှကေို ကြေးဇူးတငျကွောငျးနဲ့ သူဘယျလို ဖွတျသနျးလာရတယျဆိုတာကို ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေး ဖျောပွထားတဲ့ သီခငျြးလညျး ဖွဈပါတယျ။
Catchy ဖွဈတဲ့ သီခငျြးစာသားတှေ ပါဝငျသလို “one taught me love, one taught me patience, one taught me pain” ဆိုတဲ့ စာသားဟာ Social Media မှာ လုံးဝကို Hit ဖွဈနတေဲ့ စာသားလညျး ဖွဈတဲ့အတှကျ Ariana Grande ရဲ့ သီခငျြးကို ခံစားကွညျ့ဖို့ ဆန်ဒပွုပါတယျ။
ဒီသီခငျြးလေးကို နားထောငျပွီး ကိုယျတိုငျရော Ex တှနေဲ့ ပကျသကျပွီး ဘယျလို ခံစားခကျြတှေ ရှိလဲဆိုတာ မြှဝလေို့ ရပါတယျနျော။